San Roque အတွက်ဆုတောင်းချက်။ ကပ်ရောဂါကာလအတွက်သူတော်စင်
San Roque သို့ဆုတောင်းခြင်း ၎င်းသည်ဘဝတွင်တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်းပေါ်ပေါက်နိုင်သည့်အခြေအနေအချို့တွင်ဘုရားသခင့်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်သူအားလုံးအတွက်အစွမ်းထက်သောလက်နက်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအား ဆုတောင်းပဌနာ၏ မအောင်မြင်နိုင်ပါ၊ သူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အောင်မြင်မှုမရနိုင်သောအောင်မြင်မှုများကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆုတောင်းခြင်းသည်ထိရောက်သောတစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက်မှာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောင်းလျှောက်ရုံမျှသာမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားမှယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံထားသောအဖြေကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
San Roque သည်လိုအပ်နေသူများကိုသစ္စာရှိရှိစောင့်ရှောက်ပေးသူတစ် ဦး အနေဖြင့်မည်သည့်ရောဂါမဆိုခံစားနေရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။
ဤကိရိယာကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အလွန်လိုအပ်သောထိုအံ့ဖွယ်အမှုများသည်ခမည်းတော်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်ရန်ဆုတောင်းကြပါစို့။
1 San Roque သို့ဆုတောင်းခြင်း San Roque ကဘယ်သူလဲ။
1.1 San Roque ၏တိရစ္ဆာန်နာယက
1.2 နေမကောင်းခွေးများအတွက် San Roque ဆုတောင်းပဌနာ
San Roque သို့ဆုတောင်းခြင်း San Roque ကဘယ်သူလဲ။
သူသည် Montepellier ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏သားဖြစ်ပြီး ၁၃၇၈ တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူ၏ဘ ၀ သည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည် သူအသက် ၂၀ အရွယ်တွင်သူ၏မိဘများသေဆုံးခဲ့သည်.
Roque သည်ငယ်ရွယ်သောမိဘမဲ့ကလေးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုအချိန်ကခံစားခဲ့ရသောအဆိုးရွားဆုံးသောပိုးမွှားများထဲမှတစ် ဦး အားဖျားနာရန်ဂရုစိုက်ခဲ့သည်။
သူကဒီလူနာတွေကိုဂရုစိုက်နေစဉ် San Roque ကသူ့ကိုနဖူးမှာလက်ဝါးကပ်တိုင်အဖြစ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အံ့ဖွယ်ကုသမှုများစွာရရှိခဲ့သူပါ။
ဤအရာသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာသန့်ရှင်းသောကျမ်းစောင်များ၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အရိပ်နှင့်ပင်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီး၊ တမန်တော်ပေတရု.
ထို့ကြောင့်လူတစ် ဦး သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်အမှတ်အသားဖြင့်ကုသခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်မှာဘုရားသခင်ထံမှတိုက်ရိုက်လာသည့်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်သည်။
သူ့နေ့ကိုသြဂုတ်လ ၁၆ ရက်တိုင်းကျင်းပသည်။
San Roque ၏တိရစ္ဆာန်နာယက
သူမသည်နောက်ထပ်မိသားစုဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်၏ချစ်မြတ်နိုးသော Saint
သင်၏နာကျင်မှုကိုသက်သာစေရန်သင်၏အနာများကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လျက်, \_ t
ငါသည်ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် Franchesca ရန်သင့်အားအပ်နှင်း။
San Roque သည်တိရစ္ဆာန်အားလုံးကိုကာကွယ်ပေးသူ၊
ငါ့ချစ်လှစွာသော Franchesca ကိုစောင့်ကြည့်ပါ
သူ၌စားစရာ၊ အိပ်ရာမရှိ၊ ကုမ္ပဏီမရှိ၊ ကစားစရာများမရှိကြောင်း၊
သူသည်တိရစ္ဆာန်များ၊ ခွေးများ၊ မသန်စွမ်းသူများ၊ လူများနှင့်တိရစ္ဆာန်များ၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကူးစက်ရောဂါများနှင့်အခြားအခက်အခဲများခံစားနေရသောရောဂါများ၏နာယကဖြစ်သည်။
နေမကောင်းခွေးများအတွက် San Roque ဆုတောင်းပဌနာ
စိတ်အားထက်သန်စွာနှိမ့်ချစွာဖြင့်ခွေးနှင့်သစ္စာရှိသောမိတ်ဆွေအား ______ အားသူ့ကိုအလွန်အားနည်းစေခြင်း၊
San Roque, သင်ခွေးများကိုအလွန်ချစ်သည်၊ ငါ့ခွေးသည်ယခင်ကကဲ့သို့ရွှင်လန်းမှုပြန်ဖြစ်လာသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ကျန်းမာရေးခက်ခဲသောအချိန်တွင်ဖြတ်သန်းနေရသောအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တိရစ္ဆာန်ကိုဂရုစိုက်ရန်နှင့်ကုသမှုအတွက်အံ့ဖွယ်အမှုပြုရန် San Roque ထံဆုတောင်းဆုတောင်းနိုင်သည်။
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပါဌ်တော်ကဆုတောင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြော၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါတိုင်းကောင်းကင်ခမည်းတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုတောင်းချက်များကိုနားထောင်ရန်တလိုတလားရှိကြောင်းပြောထားသည်။
ထို့နောက်အချို့သောအကြံပေးချက်များရှိသော်လည်းတိကျသောအချိန်ဇယားမရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်ပါသည်။ နံနက်ယံ၌၎င်း, မိသားစု၏ကုမ္ပဏီ၌တည်၏အမှန်တရားကတော့အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးလုပ်နိုင်တယ်။
ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူပျောက်ဆုံးနှင့်နေမကောင်းတိရစ္ဆာန်များ၏နာယက San Roque နာယကဆုတောင်းပဌနာ။
နေ့တိုင်း San Alejo သို့ဆုတောင်းပါ